November 13, 2020 - Padaethar
သင်… ဘယ်လမှာ မွေး တာလဲ.. ? (အရမ်းမှန်တယ်နော်…ဖတ်ကြည့်လိုက် )
November 13, 2020 by Padaethar
ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရပါပြီ….
December 23, 2020 November 13, 2020 by Padaethar
ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်း မိန်းကလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ယောက်ျားလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေး ဟာ နာမည်ကျော် ဗေဒင် ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ တွက်ချက်နည်း ၊ နည်းလမ်းလေး နဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ရဲ့ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ…..သင်က 23.4.1991 သင့်ချစ်သူက 14.7.1992 သင့်မွေးနေ့ + သင့်ချစ်သူမွေးနေ့ = အဖြေ 23 +4+ 1991 + 14 +7… Read more
သင် ၏ နေအိမ် မျက်နှာလှည့်သော အရပ်ကို ကြည့်၍ လာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းစေသောနည်း
ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ချိန် အမျိုးသားတွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေထဲက သတိပြုစရာ လက္ခဏာများ
အမျိုးသား များအတွက် ဆေးနည်း
ဒီတစ်ခါတော့ မက်ဆေ့ ကနေ အမေးများကြတဲ့ အမျိုးသား များအတွက် သီးသန့် ဆေးနည်း တစ်ခုကို ရှာဖွေပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို များ၊ အမျိုးသမီး များကတော့ ခဏသည်းခံပေးကြပါ။ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ လို့ သဘောထားပေးပါ။ အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး စိတ်မရွှင်လန်းတဲ့ အမျိုးသား များ အများအပြားရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆေးနည်း ကို တောင်းလာကြတဲ့သူလည်း များပြားနေပါတယ်။ အခုပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့ အပင် ကို အင်္ဂလိပ် လို Argemone Mexicana လို့ ခေါ်ပါ တယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလို ခရာပင်လို့ခေါ်ပြီး ပင်လယ် နဲ့နီးတဲ့ နေရာ၊ ချောင်းရိုး၊ မြောင်းရိုးများမှာ ပေါက်တတ်ကြပါတယ်။ ဆူးကလေးတွေ ပါတယ်။ ဆေးနည်း (၁) … Read more
ငါးစားသူတိုင်း သိသင့်သည့် ငါးအရိုးစူးလျှင် ပျောက်ကင်းမည့် နည်းလမ်းများ